Kenya oo war Cusub ka soo saartay xiridda xeryaha Dhadhaab (Akhri) - iftineducation.com
Kenya oo war Cusub ka soo saartay xiridda xeryaha Dhadhaab (Akhri)
aadan21 / November 16, 2016
iftineducation.com – Xukuumadda Kenya ayaa hakisay dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab muddo lix bilood ah si loo helo dhaqaale iyo fursad wada tashi dheeraad ah lagu yeesho.
Wasiirka Kenya u qaabilsan arrimaha gudaha Joseph Nkaissery wuxuu intaa ku daray in dib u celinta tiro ku dhow 280,000 oo ah qaxooti ku jira xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn – Dhadhaab – ay sii socon doonto.
Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin ka dib markii kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen xukuumadda inay qaxootiga ku khasbayso inay dib ugu laabtaan Soomaaliya, walow xaaladaha dalkooda ka jira ay yihiin kuwo adag.
Xukuumadda Kenya waxay hore ugu dhawaaqday inay xirayso xeryaha Dhadhaab wixii loo gaaro dhamaadka November.
Wasiirka Arrimaha gudaha wuxuu beniyey eedeymo sheegaya in xukuumaddu ay ku khasbayso qaxootiga inay dib ugu laabataan dalkooda, wuxuuana ku tilmaamay eedeymahaas oo ka soo baxay kooxaha xuquuqda aadanaha inay yihiin ‘dacaayad siyaasadeed’.
DAAWO LA-YAAB: Cadaado ayey xil u raadsatay iyadoo xiran Jaakadda Xabada Celisa iyo Dadkii oo la yaabay